समानता व्यवहारमा हुनुपर्छ - चिठी - नारी
समानता व्यवहारमा हुनुपर्छ
फाल्गुन ६, २०७३
समानता र सशक्तीकरण अहिलेका सर्वाधिक चलेका शब्द हुन् । यथार्थ के हो भने सशक्तीकरणको अर्थ पुरुषसरह हुनु होइन भने समानता भनेको महिलाले पुरुषले गरेजस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । यी दुवै शब्द महिलालाई सबल, सक्षम, आत्मविश्वासी भएर अघि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गराउने खालका छन् । आफूलाई हरेक कोणबाट योग्य बनाउनु नै सशक्तीकरण हो ।
व्यक्ति, स्थान एवं संस्कृतिअनुरूप यसको परिभाषा पनि फरक–फरक हुनसक्छ । अहिलेको समयमा समानता भन्ने मुद्दा शब्दको खेल भैरहेको छ । पुरुषले जे गर्छन् त्यही गरेमात्र समानता हुन्छ भन्ने सोच र परिभाषा पनि पाइन्छ तर यो कहिल्यै हुन सक्दैन । परिवार र राज्यले दिने सेवा, अवसर तथा जिम्मेवारी बराबर रूपमा बाँडफाँड हुनु नै समानता हो जसबाट बिस्तारै सशक्तीकरण हुँदै जान्छ । महिलाले आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूपमा समान हुने प्रयास गर्नुपर्छ ।
अंश र वंशको अधिकार समानताको अधिकारको मेरुदण्ड हो जसलाई लागू गराउन राज्यको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ । कुरा गरेर मात्र होइन व्यवहारमै महिला समानताका लागि पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सृष्टि गिरी, नुवाकोट
माघ ९, २०७४ - एकल आमाका सन्तानले नागरिकता पाउन किन गाह्रो ?
माघ २५, २०७३ - अफिसमा कस्तो हुनुपर्छ व्यवहार
पुस २३, २०७३ - घरको ढोका कस्तो हुनुपर्छ ?
जेष्ठ २१, २०७३ - कस्तो हुनुपर्छ अफिस वेयर
फाल्गुन ५, २०७२ - कस्तो हुनुपर्छ प्रोफेसनल सम्बन्ध
माघ ९, २०७२ - समानता र सशक्तीकरणको अर्थ
थप केही चिठीबाट
पढेकी स्वास्नी मंसिर ५, २०७६
नारी बहस सान्दर्भिक जेष्ठ ७, २०७४
उपत्यकाबाहिरका कुरा बढी समेटिनुपर्‍यो जेष्ठ ७, २०७४
अझ पठनीय होस् जेष्ठ ७, २०७४
स्वतन्त्रता सबैको अधिकार जेष्ठ ५, २०७४
विद्यार्थी एवं अभिभावकका लागि वैशाख ७, २०७४